KubadBile | Warar iyo Dhacdooyin Sports - kubadbile.com
Monday, June 25th, 2018 - 18:58:00
Cayaartoy iyo tababare hore oo Ingiriis ah oo geeriyooday
0 Thursday December 10, 2015 - 08:07:26
(Kubadbile) Goolhayihii hore ee qaranka Ingiriiska Alan Hodgkinson ayaa ku geeriyooday da'da 79aad kaddib hardan iyo dagaal uu la galay xanuun uu waayo la daalaa dhacayay.
Natiijooyinka Kulamadii Champions league ee Xalay la ciyaaray, Arsenal, Chelsea iyo Roma oo soo gudbay
0 Thursday December 10, 2015 - 08:04:16
Kulamo ka tirsan Tartanka Champions league ayaa xalay laga ciyaaray waddamada Yurub, waxaana ciyaarihii xalay dhacay natiijo soo bixid uga xireyd kooxaha, Arsenal, Chelsea, Roma Gent iyo kooxo kale.
Rasmi: Macallinkii kooxda Swansea City oo Xilka tababaranimo laga xanyuubiyay
0 Wednesday December 09, 2015 - 22:16:52
(Kubadbile)-Naadiga Swansea City ayaa ku dhawaaqay inuu xilkii ka qaaday macallinka Gary Monk ,kadib markii ay kooxda soo waajahday guuldarooyin is biirsaday naadiguna uu ku sugnaa xaalad aan xasilooneyn, iyagoo waliba sheegay maamulka naadugu inay sidaa u sameeyeen maslaxadda naadiga .
Liverpool oo beegsaneysa Marko Grujic – waana Matic-ka cusub
0 Wednesday December 09, 2015 - 15:22:14
Kooxda garoonka Anfield ku ciyaarta ayaa daneyneysa Red Star Belgrade da'yarkeeda, kaasoo ay sidoo kale daneynayaan Inter, Paris Saint-Germain iyo Roma.
Rummenigge: Alonso kama tegayo Bayern
0 Wednesday December 09, 2015 - 15:20:11
Madaxa kooxda Bayern Munich ayaa waxaa uu sheegay in Bundesliga kooxda heysata aysan fasixi doonin boos dhexaadkii hore ee Liverpool.
Falanqeynta kulanka adag ee Olympiacos vs Arsenal yaa rajo Wanaagsan?
0 Wednesday December 09, 2015 - 14:09:26
Marco Silva ayaa yiri Olympiacos waxay beegsan doontaa guul xataa haddey qasaartana kama badsan doonto 1-0 ama 2-1 welina taasi waxay Arsenal ku noqon kartaa in ay ku harto Guruubyada markeedii u horreysay tan iyo 1999/2000; Arsène Wenger ayaana taas ku amaanan.
Louis van Gaal bax David Moyes soo laabo!!!
0 Wednesday December 09, 2015 - 14:09:22
Louis van Gaal ayaa aad uga hooseeya David Moyes Rikoorkii uga yiil Champions League inta uu Manchester United hoggaamiyay.
Ronaldinho oo ku sigtay inuu ku biiro Manchester United, maxaase kahor istaagay???
0 Wednesday December 09, 2015 - 12:47:53
(Kubadbile) Xagaagii 2003 waxaa idlaaday waayihii Ronaldinho ee kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain wuxuuna ku qasbanaaday inuu isaga dhaqaaqo kooxda Paris ka dhisan.
Manchester United oo la dhibtooneysa daafac yari kaddib daafacyo ka dhaawacmay xalay
0 Wednesday December 09, 2015 - 12:12:00
(Kubadbile) Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa filaneyso musiibo dhaawacyo daafaceed kaddib markii labo kamid ah daafacyada ugu muhiimsan kooxdu dhaawacmeen.
Maxaadan ka ogeyn Chelsea vs Porto Mourinho oo hadduu qasaaro la eryi doono!!
0 Wednesday December 09, 2015 - 12:00:47
Macallinka Chelsea José Mourinho wuxuu ka hor tegi doonaa kooxdiisii hore isagoo shaqadiisa Blues ay baqdin ka heysato haddii ay ka badiso Porto.
Van Gaal oo ku sababaya taageerayaasha in kooxdu hormar sameysay
0 Wednesday December 09, 2015 - 11:37:56
(Kubadbile) Maareeyaha kooxda kubadda cagta Manchester United Louis Van Gaal ayaa qirtay in kooxdiisu hormar sameyneyso inkastoo laga hor istaagay inay u gudubto wareega 16 dhammaadka Champions League.
Lukaku oo ka hadlay xiriir kala dhexeeya Didier Drogba
0 Wednesday December 09, 2015 - 11:16:56
(Kubadbile) Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Everton Romelu Lukaku oo Toddobo gool dhaliyay Lixdii kulan u danbeysay ayaa qirtay inuu marwalbe talo weydiisto laacibkii hore ay bahwadaag ugu ahaayeen Chelsea Didier Drogba.
Chelsea oo aan dooneyn inay ka dheesho Europe League
0 Wednesday December 09, 2015 - 10:20:10
(Kubadbile) Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa isku diyaarineysa in caawa ay ka hortagto kooxda FC Porto oo ay ku balansan yihiin tartanka kooxaha Yurub ee Uefa Champions League.
Daniel Sturridge oo dhaawac kale uga maqnaan doona Liverpool
0 Wednesday December 09, 2015 - 10:12:52
Liverpool weerarkeeda Daniel Sturridge ayaa toddobaadyo kale ka maqnaan doona kooxdiisa Liverpool kulamada soo socda, keddib dhaawac muruqa ah oo kasoo gaaray kulankii Newcastle.
Manchester United oo laga cirib tiray Champions League, iskana xaadirisay Europa League
0 Wednesday December 09, 2015 - 09:58:41
Kooxda Manchester United ee Horyaalka England ayaa noqotay kooxdii u horreysay ee Ingiriis ah oo ka dhacda ciyaaraha Champions league.
Layaab! InterMilan oo koobka horyaalada Yurub kula hoyatay tirada goolasha ay Bayern 5 kulan ku dhalisay
0 Tuesday December 08, 2015 - 20:46:57
(Kubadbile)-Tababaraha kooxda Chelsea Jose Mourinho ayaa waxa uu haystaa record aad naadir u ah marka la eego dhanka horyaalada Yurub kohor inta aanay la ciyaarin caawa kooxda Porto waana kulankii ugu dambeeyay ee Group-yada kulanka caawa loo ballan sanayahay .
Jose mourinho oo ku mahdinaya saaxiibtinimada Ferguson
0 Tuesday December 08, 2015 - 20:03:36
(Kubadbile) Maamulaha kooxda kubadda cagta Chelsea Jose Mourinho ayaa u arka saaxiib dhan ah oo daacad ah macallinkii hore ee Manchester United Sir Alex Ferguson.
Falcao sidee u arkaa horyaalka Mareykanka?
0 Tuesday December 08, 2015 - 16:26:21
Weeraryahanka dalka Colombia ayaa ammaanay ciyaartoy ay horay isku koox u ahaayeen oo labo ah, Labaduba waxaa ay ka mid yihiin xiddigaha ugu sarreeya American horyaalkeeda.
Louis Van Gaal oo ka hadlay xaalka adag ee Martial
0 Tuesday December 08, 2015 - 14:12:48
(Kubadbile) Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ka hadlay xaaladda adag ee uu ku jiro weeraryahanka da'da yar ee reer Faransa Anthony Martial.
Mesut Ozil oo tilmaamay waxa ka dhiman kooxda kubadda cagta Arsenal
0 Visits: 314 | Tuesday December 08, 2015 - 13:44:31
(Kubadbile) Arsenal wiilka qadka dhexe uga dheela Mesut Ozil ayaa ka hadlay xaaladda kooxdiisa oo iminka kaddib 15 kulan fadhisa booska labaad ee kala sareynta horyaalka.
« Prev1 ... 292293294295296297298 ... 351Next »
Somali young shoulders carry the nation's flag in Moscow
Monday June 11, 2018 - 18:29:20
Somalia delegation well-received in Moscow
Monday June 11, 2018 - 18:26:43
Somalia sends off three teens to Football for Friendship event in Moscow
Saturday June 09, 2018 - 13:06:38
Vicki Sparks ayaa noqotay gabadhiii ugu horaysay ee Tv British ah koobka adduunka u tabisa+Sawirro
Thursday June 21, 2018 - 10:48:05
Rikooradii laga diiwaan geliyey kulankii Koobka Adduunka ee xalay dhexmaray xulalka Iran iyo Spain
Thursday June 21, 2018 - 10:28:00
Ronaldo : Murugo ayuu ku bilaabay basle farxad ayuu ugu dabaal dagay Rikoodhna ku dhigay
Thursday June 21, 2018 - 10:05:44
Taariikhahii Laga Bartay Kulnakii Japan ay Guusha ka Gaareen Xulka Colompia.
Wednesday June 20, 2018 - 11:34:19
WARBIXIN: Waa kuwee 10-ka Gooldhaliye ee ugu Sareeysa Qaaradda Yurub? (+SAWIRO)
Saturday June 02, 2018 - 13:46:47